Bengathokozile nguye ongakawuboni Golden Altai Mountains. Phela, ubuhle kule ndawo Kuyamangalisa ngempela futhi eyingqayizivele. Futhi ubani okade elapha uyazi ukuthi indawo emangalisayo emhlabeni futhi ngeke uthole. Akumangalisi ukuthi abalobi abaningi Russian kanye angaphandle ngomdlandla bangempela wachaza ubuhle acwebile we-Altai Territory.
Hhayi-ke, ake sibone ukuthi yini Golden kumangalise kangaka Mountains? Yeka ukuthi lingakanani ithonya kufihliwe kuwo? Futhi kungani uthinte umphefumulo labo abaye khona?
Phakathi bendawo uya indaba ubudala mayelana nendlela kwakukhona kule ndawo. Ngokusho yetinsita kanye uMninimandla onke wayefuna ukudala umhlaba lapho zonke izilwane kanye nezihlahla siyophila ngokuvumelana nokuthula. Kanjalo-ke, ukuze Ukukhetha yakhe yayibukeka, wayala ukhozi, izinyamazane nemisedari emhlabeni lonke leli zwe futhi uthole eyodwa lapho inhliziyo zabo kuyajabulisa futhi ukukhanya.
Kwaphela isikhathi eside kwakukhona izinqumo, ngokukhetha ikhaya elisha okwamanje. Kodwa izinhliziyo zabo ubabonise indlela esigodini emangalisayo ozungezwe izintaba nemifula. Ekugcineni, bahlangana endaweni efanayo futhi wanquma ukuhlala lapha. Kwamthokozisa uNkulunkulu abalithandayo, njengoba ngempela izwe elihle, ngakho wasibusisa, nakho konke okuhlala kuwo.
izintaba Golden Russian
Kodwa kunento eyodwa yetinsita kuhlukile - iqiniso, wathola ososayensi. Ngakho, ngokocwaningo zabo, Golden Izintaba kwamiswa ngenxa ukushayisana of Hindustan ne-mpumalanga yezwe. Kwathi emuva kwenkathi Paleozoic, okungukuthi, iminyaka eyizigidi ezingu-500 edlule.
Nokho, kwakuhlukile kakhulu izintaba, okuyizinto bedle isikhathi libhujiswa cishe ngokuphelele. Futhi eminyakeni engu-65 million kuphela edlule, olwenzeka entsha amaminerali waqala ukwakha esizeni lanamuhla Golden Mountains. Futhi manje, ngemva kweminyaka eminingi, baba lawo magquma seqhwa ezithanda iso zezivakashi ngokuvakashela.
Njengoba igama, Kwathi kusukela Turkic "Al" - "igolide" futhi "Tai" - "entabeni". Nokho, akekho owaziyo ngempela ukuthi kungani le ndawo kwakuhlala okuthiwa. Mhlawumbe udaba wukuthi kwelanga, okuyinto repainted phezulu ezintabeni e abe luhlaza golden. Noma isizathu kwaba iminotfo yemvelo kulesi sifunda, owanikela indawo yokufihla ikhanda kanye nokudla ukuze izizukulwane eziningi Altai.
Baphi Golden Ezintabeni Altai?
Le ndawo itholakala eslphambanweni amazwe ezifana yeChina, eMongolia, Kazakhstan neRussia. Kuyinto enkulu kunazo zonke zokhahlamba eSiberia, okuyinto eyisimanga, unikezwa ingakanani le zone. Kodwa ubungako bawo abadumile Golden Izintaba nengcebo yemvelo.
Ngakho, lapha kukhona intaba ephakeme kunazo zonke eRussia Belukha, noma isiqongo ezimbili engumondli. ukuphakama Its 4509 amamitha, okwenza kube umholi ongenambangi phakathi kwakhe "izihlobo." Ngokwesilinganiso, zokhahlamba kunqoba phansi ku 1500-1700 amamitha.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngempela ingxenye enkulu izwe ngaphansi kwesivikelo UNESCO. Bangaphezu kuka-16 eziyinkulungwane sq. Km abekelwe endaweni kuqashelwe ethonyeni womuntu elimazayo.
Njengoba kushiwo ngaphambili, Golden Altai Izintaba yaziwa ngokuthanda imvelo yabo ehlukile. Ngokwengxenye enkulu lokhu kungenxa yokuthi isifunda kokuqhathanisa ocebile. Ngakho, kukhona izimfunda ivulekile futhi zotshani, zamahlathi crystal emifuleni ecacile akhelene rocks moss-esekhulile.
Kuyinto lo moya kwehlukahlukana bedraggled abahambi nososayensi. Kunengqondo, lapha wena mchishsya ensimini enkulu kakhulu futhi engenamkhawulo, ngomzuzwana, inikeza indlela ukuba ihlathi elihle, ehlanganisa firs futhi sonwele saseYurophu. Uyabukeka emehlweni futhi entabeni amakhambi, eziningi zazo ohlwini ezisengcupheni futhi zitholakala kule ndawo kuphela.
Nokho, izitshalo abaningi kwezokwelapha. Lokhu isici nomthelela yokuthi eziningi Altai abantu bathanda imithi yendabuko evamile. Ngemva kwakho konke-ke futhi inzuzo Ngokombono wabo, ngaphezulu, futhi ikhambi for izifo lemikhuhlane uhlale khona, ngokoqobo ususondele.
Isifunda walingisa emachibini nasemifuleni
Golden izinguzunga zeqhwa ezintabeni eyaqanjwa eziningi emifuleni entabeni nasemachibini amaningi. Ezinye zazo yilezi enkulu kangaka futhi emangalisayo ukuthi kufanele esabe sesaziwa ngokuthi ifa yemvelo lesintu. Ngakho, ichibi elikhulu kunawo wonke kwezindaba zesifunda ngokuthi Teletskoe. Kutholwe endaweni engamamitha 436 m, ke yahlakazeka km ezingaphezu kwezingu-70 ubude. amanzi awo ebusika nehlobo uhlala crystal ecacile, sengathi lokhu akuyona echibini, nesibuko esikhulu.
Futhi, Golden Izintaba zisenza sibe imifula emikhulu omkhulu ogeleza eRussia njengoba Irtysh kanye ob. Ake kusenabantu mncane impela - kuphela yetintsaba, nokho kungenye lezi izintaba ukuze imindeni yabo ekhaya. Kuze kufike e-Altai Territory, umfula omkhulu kunayo ubhekwa Katun. Ubude ingqikithi abakhwabanisi salo 688 km. By endleleni, ukuthi ihlangana ne Biya, ke kuphakamisa Obi.
Kodwa akugcini lapho. Ukusakaza Small namachibi chithi saka yonke indawo yakwa-sifundazwe, okwandisa ubuhle, okuyinto idume Golden Ezintabeni Altai. Izithombe ala machibi, bewitching freshness yayo futhi bahlanzeke ngokwenkolo, ukuheha izivakashi ezivela kuwo wonke omakhelwane ngisho abavela kwamanye amazwe.
Flora Altaian ezintabeni
Nezilwane we-Altai wehlukile kakhulu. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana kokubili izakhamuzi evamile yeSiberia, ezifana izimpisi, izingulube zasendle kanye nezinyamazane, kanye ezingavamile kakhulu. Ikakhulukazi, i-Altai ezintabeni kuhlale iqhwa izingwe, iqhwa izingwe kanye eSiberia iqhwa imbuzi.
Ungakhohlwa mayelana labo izilwane uthanda esibhakabhakeni kanye namanzi angaphansi komhlaba. Ngempela, sibonga inkululeko ngokuphelele futhi ukungabi pheze ephelele nethonya labantu, bakhululeke kakhulu lapha. Yingakho ezulwini zibona njalo uheshe uyaziqhenya futhi ubone kubonisa amanzi kunoma yimuphi carp izikali ezinkulu.
Altai - ipharadesi kwezokuvakasha
Zonke izivakashi abaye bavakashela lapha, wayithanda phakade Golden Ezintabeni Altai. Izithombe ezithathwe kuleli zwe elihle, kwaphela iminyaka eminingi, kuzosithinta izinhliziyo zabo zayijabulela. Lokhu akulona ihaba!
Phela, imfihlo Altai ayixhomekile kuphela indawo yayo emihle. I indima ebalulekile eyadlalwa abantu abaphila kuleli ipharadesi encane emhlabeni. umusa nobungane yabo izibopho kule ndawo komphefumulo wawo wonke isihambi yokuphumula kwengaphansi yonyawo ezweni labo. Futhi inqobo nje uma le akuguquli Golden Ezintabeni Altai kuzohlala njengoba enhle emangalisayo njengoba manje.
Amakhowe Greenfinch: incazelo, ukusatshalaliswa, nezici Culinary
Umlingisi Ivan Parshin: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Ubani abazondayo ("ozonda")?
Biography Marii Kallas - opera diva waso sonke isikhathi